... 10:24:00 PM
လောကကြီးမှာ အမှန်ပြေ အမှန်လုပ်တဲ့သူတွေက ဘုကန့် လန့်သမားတွေလို့ အပြောခံရတတ်တယ် ကိုမင်းအိမ်ရေ...ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မှန်ရာပြော ဟုတ်တာလုပ်တာ ကောင်းပါသည်... အဖွားအိုလို လူမျိုးတွေ အများကြီး ရှိနေဦးမှာပါ...စာနာမှုသာ ထားနိုင်ခဲ့ရင်..အင်းးးးးး
မှန်တာပေါ့...ရွာမှာလဲ အဲ့လို သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်.....ဟိုလူက ဟိုဟာလေးပေး ဒီဟာလေးကျွေး နဲ့တော့ ရှိတတ်တာပေါ့ ရွာ ဆိုတော့လေ။
ကန့်လန့် မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ တကယ့်အတည့်ကြီးပါ။ ကြည့်တဲ့သူတွေက ကန့်လန့်ကြည့်ရင်တော့ သူတို့အမြင်မှာ ကန့်လန့်ပေါ့ဗျာ။
လူဆိုတာလဲ အတ္တနှင့်မကင်းနိုင်ကြလေတော့.. အခက်သားကလား။
4 June 2010 at 5:45 PM
မကန့်လန့်ပါဘူး၊ ဒီတခါတော့ မငြင်းနေတော့ဘူး၊ ဖတ်ပြီး ခံစားသွားတယ်၊ ကမ္ဘာတဝှမ်းမှာ ဒီလို အဖွားကြီးတွေ အများကြီးပါပဲ..
In an ideal world, I'd like to help all of them. But I can only helpahandful.